ငါသာ log ကိုမှာနေတဲ့အချက်များအရ
အရေးကြီးသော ငါသာ log ကိုမှာနေတဲ့အချက်များအရ
1 months ago 11 တစ်နှစ် #516 by JanneAir15
ဟလို! ငါ (ဒီလိုမျိုး) တစ်ဦးခေါင်းစဉ်ဖန်တီးသောအခါငါတစ်ခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ် comment ကိုပို့စ်တင်တစ်ခုသို့မဟုတ် post ကိုကျော် 10 ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူမနျးွခငျးနှငျ့တူသောသူတို့သည်အခြားအမှုအရာတို့ကိုဖန်တီးသောအခါသင်ရရှိသင့်တယ်ကားအဘယ်သို့သော 150 မှတ်ရတဲ့မဟုတ်ပါဘူးသတိပြုမိပါပွီ။ ငါန်ထမ်းတစ်ဦးလက်မှတ်ကိုစလှေတျသျောလညျးငါဒီကနေလည်းမမေးချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကငါ့ကိုကူညီကျေးဇူးပြုပြီးနိုင်မည်နည်း
1 months ago 11 တစ်နှစ် #540 by Colonelwing
yeah ငါအရမ်း ,, ပြင်သစ်ဖိုရမ် site ကိုမှတ်ပေးမသတိထားမိကြပါပြီ ...
ဒီတစ်ခါလည်းတစ်ခုခုဆော့ဖ်ဝဲ mecanic ပေါ်မှာ right အလုပ်လုပ်မပေးပါ။
1 months ago 11 တစ်နှစ် #561 by Gh0stRider203
1 months ago 11 တစ်နှစ် #563 by Dariussssss
ဿုံရိုးသားဖို့, ငါသည်အပင်သတိပြုမိကြဘူး ... ငါ့ကိုရန်အရေးကြီးပါသည်ဘယ်လောက်ပါပဲ။ ငါအချို့အချက်များကိုစုဆောင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး .... နေ့တိုင်းလိုပဲပြဿနာများနှင့်အတူထွက်ကူညီမယ့်တကယ်ပေါက်သောဤအံ့သြဖွယ်အသိုင်းအဝုိင်းအတွက်ပျော်မွေ့ရန်, ပတ်ပတ်လည်နဲ့ဒီမှာဖိုရမ်မှာ FSX များအတွက်အကောင်းဆုံးလေယာဉ်အချို့ကိုရဖို့ဒီမှာလာ .. ။
1 months ago 11 တစ်နှစ် #564 by Gh0stRider203
သင်သည်သင်၏နာမကိုအမှီတက်, ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့အမှတ် Goto လျှင်သင်တက်လာသောမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဤမြင်ရပါလိမ့်မယ် ..
အခမဲ့ဂျမ်ဘို subscriptions ကိုရရှိရန်အချက်များစုဆောင်းပါ။
ဂျမ်ဘို 1 တစ်လကြေးပေးသွင်း = 1 000 မှတ်,3လအတွင်း =2000 မှတ်,6လအတွင်း =3500 မှတ်, 12 လအတွင်း =5500 မှတ်
1 months ago 10 တစ်နှစ် #611 by Kyrelel
ယခုကျနော်တို့ဂျမ်ဘိုဘို့အပေးဆောင်ဖို့ရှိသည် - ဒါဟာ logon မှတ်မရှိတော့ဖြစ်ပျက်လျက်, "ကျနော့်အမှတ်" option ကိုဖယ်ရှားခဲ့ပုံပေါ်မလဲ ငါ (ငါထင်) နီးပါး 2500 မှတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။
1 months ago9တစ်နှစ် #656 by Rolando
1 months ago9တစ်နှစ် #657 by Gh0stRider203
Rolando wrote: ဒါဟာဒီအကြောင်းတစ်ခုသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်ကောင်းတဲ့လိမ့်မယ်!
ya ပြောပြရန်အဘယ်အရာကိုသိပေမယ့်မထားပါနဲ့။ ကြည့်ရသည်မှာကျွန်တော်မရှိတော့ဒီနေရာပေါ်ပစ္စည်းပစ္စယလုပ်နေဘို့မှတ်ရ။ ကိုယ့်သင်ကဲ့သို့မှောင်မိုက်၌ရှိသကဲ့သို့ပေါ့။
1 months ago9တစ်နှစ် #658 by rikoooo
ကျွန်တော်နှင့်အတူလွန်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာကြောင့်ကျနော်တို့ bug တွေ၏စီးရရှိလျှင်သို့သော်အနာဂတျမှာကျနော်တို့ပြန်အသုံးပွုနိုငျ, အမှတ် system ကိုပိတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
သငျသညျ 1000 ထောက်ပြသည်ထက်ပိုခဲ့လျှင်သင့်မှတ်ဖြုန်းကြသည်မဟုတ်ဒါကြောင့်သင်ဆဲ, ငါ့ကိုအခမဲ့ဂျမ်ဘို subscription ကိုတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: PranavPoken, Gh0stRider203, JanneAir15
1 months ago9တစ်နှစ် #659 by Gh0stRider203
ငါမှဖြစ်နိုင်နီးစပ်ကအရမ်းရယ်ရတယ် malfunctioning မခံခဲ့ရဖူးလိမ့်မယ်
0.288 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်